June 21, 2021 - Khitalin Media
တင်းတိပ် ရှင်းနည်း ၁၀မျိုး
June 21, 2021 by Khitalin Media
တင်းတိပ်ကို သဘာဝနည်းနဲ့ ကုသမယ် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မျက်နှာပေါ်မှာ တင်းတိပ်ဖြစ်၍ စိတ်ညစ်နေလျှင် အောက်ပါ သဘာဝဆေးနည်းများဖြင့် ကိုယ်တိုင် ကုသနိုင်ကြပါတယ်။ (၁) ဒန္တသုခဆေးပင် အရွက်စိမ်းကို ကြိတ်၍ သနပ်ခါးနှင့်ရောစပ်ကာ ညအိမ်ယာဝင်ခါနီးတိုင်း တင်းတိပ်ပေါ်ကို လိမ်းပေးပါ။ စိတ်ရှည်စွာဖြင့် တစ်လခန့် လိမ်ပေးပါက တင်းတိပ်လုံးဝ ပျောက်ပါမည်။ (၂) ကွမ်းရွက်ကို ၃ ရွက်ခန့်ကို ပါးပါးလှီး၍ ရေ ၃ ခွက် ၁ ခွက်ဖြစ်အောင်ပြုတ်ကာ ၄င်းကွမ်းပြုတ်ရည်ကို သဘာဝပျားရည်စစ်စစ် ၂ ဇွန်းခန့်ရောစပ်၍ အဖုံးလုံးသော ပုလင်းထဲထည့်ကာ နှပ်ထားပါ။ လိမ်းခါနီး မျက်နှာကို သန့်စင်၍ မနက်နှင့်ည တစ်ရက်ကို နှစ် ကြိမ် လိမ်ပေးပါ။ (၃) ကြက်သွန်နီကို ထောင်း၍၄င်း၊ ကြိတ်၍၄င်း အရည်ညစ်ယူ၍ ရှာလကာရည်အနည်းငယ်နှင့် … Read more
ညအိပ္ရာမဝင္ခင္ ေျခေထာက္ေဆးေၾကာေပးျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
ညအိပ္ရာမဝင္ခင္ ေျခေထာက္ေဆးေၾကာေပးျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား တစ္ေန႔တာ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားရတာေၾကာင့္ လူတိုင္းနီးပါး ညဘက္ပင္ပန္းေနၾကပါတယ္။ ႐ုံးအလုပ္လုပ္တဲ့လူျဖစ္ျဖစ္ အိမ္မႈကိစၥလုပ္ေနရတဲ့လူျဖစ္ျဖစ္ အလုပ္ဖိအားေတြေၾကာင့္ အားအင္ေတြကုန္ခမ္းသလို ခံစားရတက္ပါတယ္။ ေျခအစေခါင္းအဆုံး ဦးေႏွာက္ အ႐ိုးေတြကအစ ပင္ပန္းမႈဒဏ္ကို ခံစားရေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီလိုပင္ပန္းမႈေတြကို ေျပေပ်ာက္ေစဖို႔အတြက္ ညဘက္ေကာင္းမြန္စြာအိပ္စက္အနားယူဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ညဘက္ေကာင္းမြန္စြာအိပ္စက္အနားယူဖို႔အတြက္ အလင္းေရာင္၊ သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေစတဲ့ အိပ္ရာခင္း၊ သန႔္ရွင္းသပ္ရပ္မႈနဲ႔ တျခားအပူခ်ိန္ စသျဖင့္ဂ႐ုစိုက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ညအိပ္ရာမဝင္ခင္ ေျခေထာက္ေဆးေၾကာေပးျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြရွိေနပါတယ္။ အ႐ိုးအဆစ္ နာက်င္မႈကို သက္သာေစတယ္ ေျခေထာက္က ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလုံးရဲ႕ အေလးခ်ိန္ကို ထိန္းထားရတာပါ။ တစ္ေန႔တာကုန္ဆုံးသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေျခေထာက္ေတာင့္တင္းေနသလို ခံစားဖူးၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကိုယ္နဲ႔မေတာ္တဲ့ ဖိနပ္စီးမိတာ (သို႔) တျခားကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ျဖစ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဆံပင္ကိုဂ႐ုစိုက္သလိုပဲ ေျခေထာက္ကိုလည္း ဂ႐ုစိုက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ညဘက္အိပ္ရာမဝင္ခင္ ေျခေထာက္ေဆးေၾကာတဲ့အက်င့္ေလးလုပ္ထားေပးပါ။ အ႐ိုးအဆစ္နဲ႔ … Read more
ဖေ့စ်ဘုတ်သုံးနေတဲ့ မိန်းကလေးများ ဖတ်ရန်တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းလေးပါ န် ဇာတ်လမ်းလေးပါးကလေးfbသုံးနေတဲ့မိန်းကလေးများ ဖတ်ရန်ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အနည်းငယ်သာပြောင်း၍ရေးပါသည်။ တစ်နေ့ရုပ်ဖြောင့်ဖြောင့် လူလတ်ပိုင်းဓာတ်ပုံတင်ထားတဲ့ အကောင့်တစ်ခု မက်ဆင်ဂျာကနေညီမလေး အစ်ကိုစကားနည်းနည်း ပြောချင်လို့ ရလား “ဆိုပြီးစာဝင်လာတယ်။ အကူအညီတစ်ခုတောင်းချင်လို့ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ လို့ရေးမိလိုက်တာနဲ့ဗွီဒီယိုကော ခေါ်တာခံလိုက်ရတယ်။ ရုပ်ဖြောင့်သလောက် အပြောကောင်းလွန်းလှတဲ့သူ့ စကားတွေကြားမှာဖုန်းကို ပိတ်မပစ်ရက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ”အပျိုလား” ဆိုတဲ့သူ့စကားကကျမကို နည်းနည်း တုန်လှုပ်စေခဲ့တယ်။ ခနလောက်ငိုင်နေပြီးမှကျမယောင်္ကျားနဲ့ ကျမ အတူတူတွဲရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေး တစ်ပုံ ပို့ပေးလိုက်တယ်။ “ညီမတို့ ချစ်သူတွေလား “ဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးက ကျမကို ကြည်နူးသွားစေပါတယ်ဘေးနားမှာ အိပ်ပျော်နေရှာတဲ့သားလေးကိုမလုံမလဲ ကြည့်လိုက်မိတယ် ။ ကျမယောကျာ်း လူရိုးကြီးကတော့ယာတောကပြန်မလာသေးပါဘူး။ ကျမ ထင်လိုက်တာကတစ်ခါတည်းနားအေးအောင်ဆိုပြီး အမှန်ကိုချပြလိုက်တာမှ ပိုဆိုးသွားပါတယ် တိုတိုနဲ့လိုရင်းကိုပြောရရင်ကျမ တို့နေ့တိုင်းဖုန်းပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ဖုန်းမလာရင်ကျမကစခေါ်တတ်နေပါပြီကျမယောက်ျား လူရိုးကြီးကတောဘာမှမသိရှာပါဘူး။ သူ့ကတော့ ကျမကိုသိပ်ပြီးဂရုမစိုက်နိုင်ပါဘူးယာတော … Read more
၃ရက္အတြင္းမိုးႀကီးႏိုင္သျဖင့္ ေရေၾကာင္း ေလေၾကာင္း ကုန္းေၾကာင္း ခရီးသြားလာျခင္း မလုပ္ရန္ သတိေပးခ်က္…
(၃)ရက်အတွင်း မိုးကြီးနိုင်သဖြင့် ခရီးသွားလာခြင်းမပြုလုပ်သင့်သောဒေသများနှင့် မိုးလေဝသ သတိပေးချက် ၃ရက်အတွင်းမိုးကြီးနိုင်သဖြင့် ရေကြောင်း လေကြောင်း ကုန်းကြောင်း ခရီးသွားလာခြင်း မလုပ်ရန် သတိပေးချက်… ငပလီ သံတွဲ တောင်ကုတ် ၃ရက်အတွင်းမိုးကြီးနိုင်သဖြင့် ရေကြောင်း လေကြောင်း ကုန်းကြောင်း ခရီးသွားလာခြင်း မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး…. 21/06/2021 နေ့ produce heavy rainfall across the area. နောက် ၂၄နာရီအတွင်း ဂွ ကျိန္တလိ ငပလီ သံတွဲ တောင်ကုတ် ဥသျှစ်ပင် ပန်းတောင်း မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်…. su su san (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၁)ရက်နေ့ နံနက်(၇:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေ။ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင် မုတ်သုံလေ အားအသင့်အတင့် ရှိနေပါသည်။ယနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်။စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်းနှင့်အရှေ့ပိုင်း)တို့တွင် … Read more
မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံ ရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ပထဝီဝင် ပါမောက္ခဒေါက်တာ ဒေါ်သင်းကြည် (မြန်မာအမျိုးသမီးများထဲမှနိုင်ငံရပ်ခြား ပါရဂူဘွဲ့ကို ပထမဦးဆုံး ဆွတ်ခူးခဲ့သူ) ၁။ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ဒေါ်သင်းကြည်ကို မြန်မာအမျိုး သမီးများထဲမှာ ပထမဆုံး နိုင်ငံခြားက ပါရဂူဘွဲ့ ယူလာသူအဖြစ် သိသူများပါတယ်။ ၁၉၅၀ ခုနှစ် အမေရိကန်နိုင်ငံ ကလပ်တက္ကသိုလ်မှာ ပထဝီဘာသာနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်မဖြစ်ခင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က အင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးတွေ လန်ဒန်မှာ ပါရဂူဘွဲ့ သွားယူကြတာတွေ ရှိပေမယ့် မြန်မာအမျိုးသမီးတွေထဲ ကတော့ ဒေါ်သင်းကြည်က ပထမဆုံးပါ။ မြန်မာပြည်မြေပုံ ပထမဆုံးရေးဆွဲသူ ဒေါက်တာဒေါ်သင်းကြည်(တောင်ငူသူ) ၂။နောက် ဒေါက်တာ ဒေါ်သင်းကြည်ဟာ ဒီကနေ့ ကမ္ဘာက လက်ခံသုံးစွဲနေတဲ့ မြန်မာပြည်မြေပုံကို နယ်သာလန်နိုင်ငံ အမ္စတာဒမ္က ဂျမ်ဘာတန် ပထဝီ မြေပုံဆွဲဌာနနဲ့အတူ ကြီးကြပ် ရေးဆွဲ တည်းဖြ … Read more
မိန်းကလေးတွေ အတွက်ကတော့အထူးဖတ်သင့်ပါတယ် စာဖတ်တာက ပျင်းစရာမဟူတ်ပါဘူး ဖတ်သင့်တဲ့စာကို ဖတ်ပါ
မိန်းခလေးတွေ သေချာဖတ်ပါ ဒီခေတ်မှာ မိန်းခလေး တစ်ယောက်မြတ်မြတ်နိုးနိုး နဲ့အချစ်ခံရဖို့ဆိုတာ ရှားသွားပြီ။ မခူးရက်တဲ့ ပန်းလေးတစ်ပွင့်ကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ ့ထိုင်ကြည့်နေသလို မြတ်နိုးမှုမျိုးနဲ့ ချစ်ဖို့ဆိုတာ ဟာသတစ်ပုဒ် လိုတောင် ဖြစ်နေပြီ၊ ရည်းစားထားတာ အလှထိုင်ကြည့်ပြီး ဘာလုပ်ရမှာလဲ ကိုယ်မစားလည်း သူများစားမှာပဲ ဆိုတာတွေက ပါသေးတယ်။ သူများသုံးပြီးသား ညစ်နွမ်းနေတဲ့ ပုဝါလိုမျိုး အရင်လူနဲ့ ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ခဲ့တာကို တန်ဖိုးကြီး ပစ္စည်းလို တန်ဖိုးထားနေလည်း အလကားပဲဆိုတဲ့ လူတွေနဲ့ ဒီလိုခေတ်ထဲမှာ မိန်းမဖြစ်ရတာ လူသုံးကုန် ပစ္စည်းတစ်ခုလိုပဲ…ပိုက်ဆံတတ်နိုင်တဲ့သူတွေကသူတို့လိုအပ်တာကိုပိုက်ဆံပေးပြီး ဝယ်တယ်။တမင်ယုတ်မာတဲ့သူတွေက အချစ်ဆိုတာကို အသုံးချပြီး ကိုယ်လို ချင်တာကို ရအောင်ယူတယ်၊ ကတိတွေပေးတယ်ေ မျှာ်လင့်ချက်တွေ ပေးတယ်၊တစ်ဖက်မိန်းကလေးရဲ့အနာဂတ်တွေကို အိပ်မက်တွေပေးပြီး စိတ်ကြိုက်ခြယ်လှယ်နေတာ။ပြည့်တန်ဆာနဲ့ အိပ်တတ်တဲ့ ယောက်ျားတွေက မယုတ်မာဘူး၊တန်ရာတန်ကြေးပေးပြီး သူတို့လိုအပ်တာကို ဝယ်တာ၊ချစ်ပါတယ်ဆိုပြီး အတူအိပ်ချင်ကြတဲ့ယောက်ျားတွေ ကတော့ပိုပြီး … Read more
မိမိ ချစ်သူ နဲ့ တစ်သက်လုံးမခွဲရဘဲ အိုအောင် မင်းအောင် ပေါင်းသင်းရမှာ အမှန်ပါ။ အဆောင် (၁) = ကိုယ်ကျင့်တရား ။ ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းမွန်ရပါမယ် ။ တစ်ယောက်မကြိုက်တာ တစ်ယောက်မလုပ်ပါနဲ့။ အတူတူ ဘုရားသွားကျောင်းတက် ကောင်းမှုတွေ အတူတူ ပြုခဲ့ဖူးရပါမယ် အဆောင် (၂) = ယုံကြည်မှု ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ယုံကြည့်မှု တွေရှိရမယ် ။ မိမိချစ်သူအပေါ်မှာ သစ္စာရှိရမယ် ရိုးသားရမယ် ။ မလိုအပ်တဲ့ သံသယတွေ မရှိရဘူး ။ သံသယရှိလာရင် မေးမြန်းစုံစမ်း၊ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီး သံသယတွေကို ဖြည်ဖျောက်ပါ ။ ဒီအဆောင်ကို နှစ်ဦးစလုံး ဆောင်ထားရမှာပါ ။ အဆောင် (၃) = ပေးကမ်းခြင်း … Read more
တစ်ကယ်အဖြစ်ပျက်လေးပါ ဖာခေါင်းများသို့ပေးစာ ယခုခေတ် လူငယ် ကျား/မ မရွေး ပြီးဆုံးအောင်ဖတ်ပေးကြ​စေလိုပါတယ်​​နော်​. a´ ” ဟျောင့် ငါ့စော်ဆီကအဖြေရပြီကွ “b´ ” ဟုတ်လား ” Congrats သားကြီးတစ်ဝိုင်းတော့လုပ်လိုက်တော့ လအနည်းငယ်အကြာ……bဟျောင့် မင်းစော်နဲ့ ဘယ်အခြေအနေရောက်နေပြီလဲ ” ပြောစမ်းပါဦး ”aဒီလိုပါပဲကွာ ” အဆင်ပြေပါတယ် ”bငါမေးတာက ဟိုဟာဒီဟာလုပ်ပြီးပြီလားa” ဟာ ” မဖြစ်ရသေးပါဘူးကွာဒီတိုင်း ရိုးရိုးသားသားပဲချစ်ကြတာပါကွbမင်းကလဲ ညံ့လိုက်တာကွာ,,,ဒီခေတ်က ကိုယ်မစားရင် ” သူများစားတဲ့ခေတ်ကွ ”a” ဟင် ” ဟျောင့် ဘာဆိုင်လို့လဲကွ…b” အေးမှတ်ထား … Read more